Tuesday December 10, 2019 - 21:23:55 in Wararka by Super Admin
Koox Inqimaasiyiin ah oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa caawa weerar xooggan ku qaaday Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, kaas oo ah dhisme kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee DFS, islamarkaana hooy u ah wasiirada, xildhibaanada iyo saraakiis
Koox Inqimaasiyiin ah oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa caawa weerar xooggan ku qaaday Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, kaas oo ah dhisme kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee DFS, islamarkaana hooy u ah wasiirada, xildhibaanada iyo saraakiisha dowlada.
Warar hordhac ah oo aan helnay ayaa sheegaya in Hotelka ay xoog ku galeen dagaalyahanno aad u hubeysan oo katirsan Al-Shabaab kuwaas oo toogasho ba'an u geystay saraakiishii iyo madaxdii joogtay Hotelka, iyadoo intaas ka dibna ay dagaalyahanadu bilaabeen in ay qolqol u galana Hotelka halkaas ku xasuuqaan dadkii ku jiray.
Saraakiil ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa Idaacadda Andalus u sheegay in hadda dagaalyahanada hubeysan ay dhufeyso adag ka sameysteen gudaha Hotelka islamarkaana ay iska caabiyeen weeraro dhowr ah oo ay soo qaadeen maleeshiyaatka DFS oo doonaya in ay dib usoo ceshtaan gacanta ku heynta Hotelka.
"Mujaahidiintu weli iyaga ayaa heysta Hotelka, waxayna iska caabiyeen ugu yaraan 4 weerar oo ay soo qaadeen maleeshiyaatka murtadiinta, kuwaas oo midkii u dambeeyey uu ahaa weerar ay u adeegsadeen gawaarida dagaalka, balse Allaah fadligii waan iska caabinay, mid ka mid ah gaadiidkoodii ayeyna uga carareen ilinka Hotelka ka dib markii aan qarax xoogan lala beegsaday" sidaas waxaa yiri sarkaal ka tirsan Mujaahidiinta oo la hadlay Idaacadda Andalus.
Buuqa iyo sawaxanka maleeshiyaatka DFS ayaa hareeyey afaafka hotelka iyo xarunta madaxtooyada, waxaana maleeshiyaatka lagu canaanayaa inay si degdeg ah usoo afjaraan howlgalka si loo soo bad-baadiyo madaxda ku go'doonsan Hotelka.
ilo wareedyo aan la hadlnay waxay noo sheegeen in meydad fara badan oo aanan ilaa hadda qaarkood la aqoonsan inay daadsan yihiin afaafka hore ee Hotelka, waxaana jira warar hordhac ah oo tilmaamaya in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah.